( MM versions ) Computer ebooks collection - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်ရပ်တည် ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ အင်တာနက်ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာ English လိုရေးထားတဲ့ နည်းပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Ebooks တွေများသလောက် - မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ Ebooks တွေက တော်တော် ရှားပါးသလို ရှာဖွေရလည်း ခက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ထုတ်ဝေသူတွေ ရှိနေပေမယ့် ( အရမ်း စေတနာထား အချိန်ပေးနိုင်လွန်းတဲ့ လူတစ်ချို့ရဲ့ Scan ဖတ်ပြီး တင်ပေးတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် တက်လာတဲ့စာအုပ်တချို့ရယ် ၊ ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီး ရေးပေးတဲ့ လူတစ်ချို့ရယ်ကြောင့်က လွဲရင် ) အွန်လိုင်းပေါ်ကို မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေက တက်မလာခဲ့ပါဘူး။
မြန်မာလူမျိုးထဲမှာ ကွန်ပြူတာ အကြောင်းကို တိတိပပ နားလည်တဲ့သူ ၊ သုံးတတ်တဲ့သူ ၊ ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့သူ - ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လည်ပတ်လုပ်ကိုင်နေသူ အမြောက်အများရှိပေမယ့် တစ်ချို့က စာရှင်းပြရတာ ဝါသနာ မပါ၊ တစ်ချို့က စာရေးရတာ ဝါသနာမပါ၊ တစ်ချို့က အချိန်မပေးနိုင် စသဖြင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မြန်မာဘာသာနဲ့ ရေးထားတဲ့ နည်းပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Ebooks ဆိုတာ Internet ထဲမှာ အရင်တည်းကလည်း ရှားပါးနေသလို ခုထိလည်း ရှားပါးနေဆဲပါပဲ။
ဒီ အကျပ်အတည်းကြောင့် နိုင်ငံခြားကို အကြောင်းအမျိုးနဲ့ ရောက်လာကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ သူများနိုင်ငံမှာ မူလတန်း အလယ်တန်းအဆင့် လောက်တည်းကတင်သုံးတတ်တဲ့ applications တစ်ခုကို ကောင်းကောင်း မသုံးတတ်ကြဘူး။ မြန်မာတွေညံ့လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့လာ အားထုတ်မှု နည်းတာကြောင့်လို့လည်း ပြောလို့ရသလို - အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်လောက်အောင် လေ့လာချင်လောက်အောင် ပံ့ပိုးထားမှု မရှိတဲ့ ၊ ပံ့ပိုးပေးသူ မရှိတဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက်တွေကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ လေ့လာချင်တယ် မြန်မာလိုရှင်းပြ ဖော်ပြထားတဲ့ စာအုပ်က မရှိဘူး။ တစ်ခုခုဆို English လိုရေးထားတဲ့ Ebooks တွေပဲ လက်ညှိုးထိုးထိုးပြကြတယ်။ ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်စာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာလူမျိုး မြန်မာလိုရှင်းထားတာလေးတော့ ပိုဖတ်ချင်တာပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ဘာသာ မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားဘာသာစကားတစ်ခုကို ဖတ်ပြီး နားလည်အောင် ကြိုးစားရတာထက် မြန်မာလူမျိုး မြန်မာလိုရေးထားတာကို ဖတ်ပြီး နားလည်ရတာ ပိုပြီး အဆင်ပြေတယ် မဟုတ်ဘူးလား။
ဒီအကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ၁၀၀ % ကျွန်တော် မစွမ်းဆောင်နိုင်ပေမယ့် ၁ % လောက်တော့ ပံ့ပိုးနိုင်ဖို့ ကျွန်တော် ကြိုးစားကြည့်ချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အတွက် ကျွန်တော့်မှာ စုဆောင်းထားပြီးသားရှိနေတဲ့ မြန်မာလိုရေးသားထားပြီးသား ကွန်ပြူတာ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ စာအုပ်လေးတွေကို တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ဒီ စာအုပ်တွေက ကျွန်တော် ရေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် အခက်အခဲ ဖြစ်ခဲ့စဉ် တစ်ချိန်က အင်တာနက်မှာ မှိုလိုပေါက်အောင် ဆိုဒ်တကာ လိုက်ရှာ - အင်တာနက်ထဲက တွေ့သမျှ အသိကိုတောင်း ၊ နားလည်သမျှ လူကိုမေးနဲ့ စုဆောင်းထားတာတွေပါ။ စာအုပ်တွေက ဟောင်းကောင်း ဟောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကွန်ပြူတာ အကြောင်းကို အခြေခံ လေ့လာနေသူတွေ applications တစ်ခုအကြောင်းကို တစ်လုံးမှ နားမလည်သေးသူတွေ အတွက်တော့ဒီ မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေထဲက တစ်အုပ်အုပ်က အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ အကူအညီပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ စာအုပ်တွေအားလုံးထဲမှာ ၂ အုပ်လောက်ကတော့ နည်းပညာနဲ့ မဆိုင်တာလေးတွေ ပါနေပါတယ်။ အဲတာ ကျွန်တော့်အားနည်းချက်ပါ။ Upload တင်ပြီးမှ သတိထားလိုက်မိလို့ပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း အကျိုးတော့ မယုတ်ပါဘူး။ ဗဟုသုတတော့ ရကောင်းရနိုင်ပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ်ချရင် ရရှိလာမယ့် စာအုပ်စာရင်းက ဒီအောက်မှာပါ။
Adobe Acrobat 4.0.pdf
Adobe PageMaker 7.0.PDF
Apache WEB Server.pdf
AutoCAD 2002 ( Myanmar).pdf
Basic Windows & MicrosoftWord.pdf
Change or Reset Windows Password fromaUbuntu Live CD.pdf
Content Management System & Dynamic Portal Engine.pdf
Creating Recovery Disc.pdf
Domain Name System ( DNS ) Server.pdf
Dynamic Host Configuration Protocol ( DHCP ).pdf
How to install Wordpress by mmWordPress.pdf
How to Use Win RAR.pdf
Install Windows7with USB Drive.pdf
Internet Connection Sharing (ICS).pdf
Kaspersky Offline Update methods.pdf
Laboratory Exercises with Linux.pdf
Linux Myanmar Language.pdf
mail server & client(Myanmar Version).pdf
Making Wordpress Blog By KoYin Pyae Sone.pdf
Matlab MM book.pdf
Microsoft Access 2002.pdf
Microsoft FrontPage 2002.pdf
Microsoft PowerPoint 2002.pdf
Microsoft Visual Basic 6.0.pdf
Microsoft Windows NetMeeting 3.01.pdf
Network Address Translation ( NAT).pdf
Protecting from Network Threats.pdf
Remote Desktop Environment (Real VNC Version 4.1.1).pdf
Resetting A Forgotten Password In Ubuntu Linux.pdf
Set upaSmall Office or Home Office Network (SOHO).pdf
Streaming Server(Myanmar Version).pdf
Total Commander ဆိုတာ ဘာလဲ.pdf
Understanding PC Harware.pdf
Using of Intertnet.pdf
Video Conferening Server.pdf
web site creating.pdf
What is an IP Address.pdf
What ments engineer!.pdf
Window 7 Installation.pdf
Windows 2003 Server DHCP Tuning.pdf
Windows7တွင် Virtual Hard Disk ပြုလုပ်ခြင်း.pdf
Windows Vista Installation Guide.pdf
Windows XP Installation Guide.pdf
WINRAR နှင့်ဖိုင်အပိုင်းများ စိတ်ပိုင်းခြင်း.pdf
အရင်တည်းက တစ်အုပ်ချင်းစီ ပြန်တင်ပေးချင်တာ ကျွန်တော်လည်း အချိန်မပေးနိုင်လို့ ချက်ချင်း မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူး - နောက်ပိုင်း လိုသူတွေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ စာအုပ်ကို တစ်အုပ်ချင်း ယူနိုင်အောင် အခု တစ်အုပ်ချင်းစီ အားလုံး ပြန်တင်ပေးထားပါတယ် - နောက်တိုး ကျွန်တော် စုဆောင်းထားတဲ့ ကွန်ပြူတာအကြောင်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး မြန်မာလို ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်တွေပါ ထပ်ဖြည့်ပေးထားပါတယ် - links ခဏခဏ ပျက်တိုင်း ထပ်ဖြည့်ပေးနိုင်ဖို့ မသေချာတဲ့ အတွက် တတ်နိုင်သမျှ အားစိုက်ပြီး ဒေါင်းထားစေချင်ပါတယ် - ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိနေတယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်ယောက် လိုချင်လို့ အခက်အခဲ ဖြစ်တဲ့ အခါ Upload တင်ပေးပြီး အချင်းချင်း ကူညီပေးလိုက်ကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံ ပါရစေ -
Dial_up_connection.pdf (1.88 MB)
Adobe_PageMaker_7.0.PDF (6.13 MB)
ADSL_connection.pdf (1.89 MB)
Blog ပြုလုပ်ခြင်း ( Agilityhoster.pdf ) (632.56 KB)
agilityhoster.pdf (632.56 KB)
Apache_WEB_Server.pdf (106.17 KB)
Robert TinAye - AutoCAD_2002__Myanmar.pdf (47.88 MB)
AutoCAD_2002__Myanmar.pdf (47.88 MB)
ကကကွန် - AutoCAD_2002.pdf (1.06 MB)
AutoCAD_2002.pdf (1.06 MB)
Autocad_2005_by__u_aung_myint.pdf (24.23 MB)
Basic_Windows__MicrosoftWord.pdf (1.04 MB)
Blogger_Handbook_Inside.pdf (3.27 MB)
Broadband_wireless_local_loop_connec... (1.08 MB)
broadband_wireless_local_loop_connection.pdf (1.08 MB)
Blog ပြုလုပ်ခြင်း ( byethost.pdf ) (1.22 MB)
byethost.pdf (1.22 MB)
Change_or_Reset_Windows_Password_fro... (1.06 MB)
Change_or_Reset_Windows_Password_from_a_Ubuntu_Live_CD.pdf (1.06 MB)
Content_Management_System__Dynamic_P... (2.32 MB)
Content_Management_System__Dynamic_Portal_Engine.pdf (2.32 MB)
Content_Management_System_CMS.pdf (2.32 MB)
Creating_Recovery_Disc.pdf (684.75 KB)
HTML.pdf (1.75 MB)
Domain_Name_System__DNS__Server.pdf (326.13 KB)
Dynamic_Host_Configuration_Protocol (154.22 KB)
Dynamic_Host_Configuration_Protocol__DHCP_.pdf (154.22 KB)
FTP Myanmar_Version.pdf (88.26 KB)
ftpMyanmar_Version.pdf (88.26 KB)
Google_Apps_email.pdf (493.46 KB)
HARDWARE.pdf (188.19 KB)
How_to_install_Wordpress_by_mmWordPr... (1.22 MB)
How_to_install_Wordpress_by_mmWordPress.pdf (1.22 MB)
How_to_Use_Win_RAR.pdf (1019.09 KB)
How-to-install-myanmar-font-on-ubuntu (814.76 KB)
how-to-install-myanmar-font-on-ubuntu910.pdf (814.76 KB)
How to make myanmarblog.pdf (6.74 MB)
howtomakemyanmarblog.pdf (6.74 MB)
Making_Blog.pdf (2.15 MB)
IndesignCS3.pdf (21.01 MB)
Install_Windows_7_with_USB_Drive.pdf... (6.33 MB)
Install_Windows_7_with_USB_Drive.pdf (6.33 MB)
Internet_Connection_Sharing_ICS.pdf (334.33 KB)
မျိုးသူရ - Internet-apply.PDF (18.39 MB)
internet-apply.PDF (18.39 MB)
Ipstar_connection__2.pdf (1011 KB)
Kaspersky_Offline_Update_methods.pdf... (1.79 MB)
Kaspersky_Offline_Update_methods.pdf (1.79 MB)
Laboratory_Exercises_with_Linux.pdf (1.24 MB)
Linux_OS_Myanmar.pdf (4.24 MB)
Linus_OS_Myanmar.pdf (4.24 MB)
LinuxOSMyanmarVersion.pdf (4.25 MB)
LinusOSMyanmarVersion.pdf (4.25 MB)
Linux_Myanmar_Language.pdf (6.69 MB)
Linux_Lab.pdf (897.83 KB)
Mail_server__clientMyanmar_Version.p... (1.15 MB)
mail_server__clientMyanmar_Version.pdf (1.15 MB)
Microsoft_Windows_NetMeeting_3.01.pd... (544.31 KB)
Microsoft_Windows_NetMeeting_3.01.pdf (544.31 KB)
Making_Wordpress_Blog_By_KoYin_Pyae_... (1.06 MB)
Making_Wordpress_Blog_By_KoYin_Pyae_Sone.pdf (1.06 MB)
Making-wordpress-blog.pdf (1006.32 KB)
Matlab_MM_book.pdf (96.73 MB)
Microsoft_Access_2002.pdf (6.84 MB)
MICROSOFT_EXCEL_2002.pdf (1.62 MB)
Microsoft_FrontPage_2002.pdf (1.71 MB)
MICROSOFT_OFFICE_2010.pdf (3.3 MB)
Microsoft_PowerPoint_2002.pdf (6.71 MB)
Microsoft_Visual_Basic_6.0.pdf (5.64 MB)
Protecting_from_Network_Threats.pdf (88.56 KB)
MS_WordXP.pdf (1.45 MB)
Network_Address_Translation__NAT.pdf... (121.33 KB)
Network_Address_Translation__NAT.pdf (121.33 KB)
Networking_edition1.pdf (550.83 KB)
PageMaker_7.0.pdf (3.38 MB)
Partition_manager.pdf (2.05 MB)
PC_upgrading.pdf (100.05 MB)
PCupgraderepair_simplified.pdf (123.23 MB)
PDF_document.pdf (415.82 KB)
PhotoShop_7.0.pdf (13.13 MB)
AutoCAD2010_Ebook.rar (49.3 MB)
C++ ဦးအောင်မြင့် .rar (10.37 MB)
C_.rar (10.37 MB)
Using_of_Intertnet.pdf (825.7 KB)
Adobe_Acrobat_4.0.pdf (5.18 MB)
Remote_Desktop_Environment_Real_VNC_... (286.71 KB)
Remote_Desktop_Environment_Real_VNC_Version_4.1.1.pdf (286.71 KB)
Resetting_A_Forgotten_Password_In_Ub... (306.56 KB)
Resetting_A_Forgotten_Password_In_Ubuntu_Linux.pdf (306.56 KB)
Set_up_a_Small_Office_or_Home_Office... (298.29 KB)
Set_up_a_Small_Office_or_Home_Office_Network_SOHO.pdf (298.29 KB)
Streaming_Server_Unreal_Server_Myanm... (267.54 KB)
Streaming_Server_Unreal_Server_Myanmar_Version.pdf (267.54 KB)
Streaming_ServerMyanmar_Version.pdf (134.3 KB)
TelnetMyanmar_Version.pdf (176.21 KB)
Torrent__Document.pdf (1.82 MB)
Total_Commander__.pdf (1.13 MB)
TurboC.pdf (577.02 KB)
Ubuntu_Install.pdf (1.16 MB)
Understanding_PC_Harware.pdf (15.23 MB)
Windows_7_Installation_Guide.pdf (336.98 KB)
Video_Conferening_Server.pdf (104.35 KB)
Introduction To Computer Science Vol1Book.pdf (2.03 MB)
Vol1Book.pdf (2.03 MB)
Windows 98 Vol2_Book.pdf (2.39 MB)
Vol2_Book.pdf (2.39 MB)
Windows 98 Vol_12.pdf (2.51 MB)
Vol_12.pdf (2.51 MB)
Web_site_creating.pdf (340.78 KB)
Learning web design.pdf (2.42 MB)
web.pdf (2.42 MB)
What_is_an_IP_Address.pdf (141.41 KB)
Wi-Fi_connection_2.pdf (1.09 MB)
WiMax_connection.pdf (988.02 KB)
Window__7__Installation.pdf (1.9 MB)
WINRAR__.pdf (853.83 KB)
Windows_7__Virtual_Hard_Disk_.pdf (4.47 MB)
Windows_2000_Server.pdf (774.57 KB)
Windows_2003_Server_DHCP_Tuning.pdf (184.52 KB)
Windows_installation.pdf (1.7 MB)
Windows_note.pdf (1.68 MB)
Windows_Vista_Installation_Guide.pdf... (323.46 KB)
Windows_Vista_Installation_Guide.pdf (323.46 KB)
Windows_XP_Installation_Guide.pdf (500.99 KB)
တစ်အုပ်ချင်း မလိုချင်သူများ အားလုံးစုပြီး ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ဖို့ Rar နဲ့ စုထားတဲ့ Download links တွေက အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပါ - တတ်နိုင်သမျှ အဆင်အပြေဆုံး ဖြစ်အောင် နဲ့ ကြာရှည်ခံအောင် Multiupload ကနေ တင်ပေးထားပါတယ်။ Links တွေ ခဏခဏ ပျက်တဲ့ ပြဿနာကနေ အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းထားနိုင်အောင်လို့ပါ။ Megaupload ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရွေးချပါ -
( သတိပြုရန် ! အောက်ဖော်ပြပါ စုစည်းမှုဟာ ပထမဆုံးအကြိမ် စုစည်းတင်ဆက်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေမို့ အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ စာအုပ်အားလုံး ပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး )
Computer ebooks collection ( MM versions ).part1.rar (95.4 MB)
Computer ebooks collection ( MM versions ) Part 1 to5က သပ်သပ်တစ်ခု။ Computer ebooks collection ( MM versions ) Making Blog.rar က သက်သက် တစ်ခုပါ။ ( ၂ ) ခုလုံးအတွက် password ကတော့ အောက်ဖော်ပြပါ password တစ်မျိုးတည်းပါပဲ။ အဲ့ ၂ မျိုးကို တစ်ခါစီ ဖြည်ပေးပါ။
မိသားစု အားလုံး နည်းပညာ အခက်အခဲများ ပြေလည်နိုင်ကြပါစေ။
Last edited by KznT; 12-01-2011 at 10:09 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 76 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုစံငြိမ်း, ကိုပျင်း, ကိုဦး, ချစ်သားငယ်လေး, ဂတုံးလေး, စစ်တွေသားချေ, စိုးမြတ်, ဆန်းမောင်, ဇာနည်မောင်, ညီခဝေ, တကောင်ဘွား, ထွန်းတော်, ဒါဒါ, နီထွန်းဦး, ပညာ, ပိုင်စိုး2222, မင်းဇော်ထွေး, လမင်းမျက်နှာ, လမ်းပြကြယ်, သက်တန့်, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းသူအောင်, ဧရာဝတီ, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, ဝေယံ, ငြိမ်းချမ်း, မြင့်မိုရ်, နိုးတူး, 666, amaung344, arkaraung, athaylay1, aungzawlin, AZM, bodavid20, bonge, chitnyimalay, comic_, crush, daya, eiei, godoflove, hellboy, hightechkey, ko myo, kwarsi, kyaukphyu, kyawminkhoung, lazyguylay, leostar81, luulinpyo, Lwin Thu, maungwanna, maungzaw, mawni, minthumon, nayzaw3053, openeyes, paradise(SMTU), phoetharlay, phyomyintthein, soehtetpaing, stability09, thurein, thureinsoe, tu tu, waiyan, winaingso, Ye Aung, zo, zoard
ပို့စ် 28 ခုအတွက် 327 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - ( MM versions ) Computer ebooks collection
အကိုရေ mediafire နဲ့ တင်ပေးနိုင်ရင်တော့ အတိုင်းအထက်အလွန်ပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ ဘန်းကျော်ကနေ multiupload က ပေးတဲ့ hosting site တော်တော်များများက အဆင်မပြေနိုင်လို့ပါ။ mediafire နဲ့ဆိုရင် downthemall နဲ့ ကောင်းကောင်းဒေါင်းလို့ရတော့ ပိုအဆင်ပြေလို့ပါ။
[CENTER][FONT="Century Gothic"][SIZE="5"][URL="http://www.facebook.com/pages/Save-Irrawaddy/177488512319900"]Save Irrawaddy[/URL][/SIZE][/FONT][/CENTER]
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ 666 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
hightechkey, maungzaw, zo
ကျွန်တော်လည်း Email ရရချင်း Mediafire ရော Ifile ကနေပါ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် - Mediafire ဆို Mediafire မှာ တင်ထားသမျှ ( ၅ ) ပိုင်းလုံးကိုပဲ Download ချပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် Ifile ကဆိုလည်း Ifile အောက်မှာ ရှိတဲ့ ( ၅ ) ပိုင်းလုံးကိုပဲ Download ချပါ။ ကြိုက်ရာ ခေါင်းစဉ်အောက်က တစ်ခုကိုသာ ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ လိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာ Mediafire က ( ၃ ) ပိုင်းချ Ifile က ( ၂ ) ပိုင်းချ - အဲလိုချပြီး ပြန်ပေါင်းလို့ မရပါဘူး။ ဒီတစ်ခါ တင်ပေးတဲ့ အထဲမှာ အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ စာအုပ်တွေ အပြင် နောက်ထပ် Windows XP7Vista Step by Step Installation Guide.pdf စာအုပ် သုံးအုပ်ပါ ထပ်ပေါင်းဖြည့်ပေးထားပါတယ်။ စုစုပေါင်း ( ၅၇ ) အုပ်ပါ။ မှာထားပြီးရင်တော့ လာဒေါင်းဖြစ်အောင် ဒေါင်းနော် - မဒေါင်းရင်တော့ ချိတ်ချိုးမှာဗျ။
Windows7Installation Guide.pdf
Computer ebooks collection ( MM versions ).part1.rar 100.14 MB
Computer ebooks collection ( MM versions ).part2.rar 100.14 MB
Computer ebooks collection ( MM versions ).part3.rar 100.14 MB
Computer ebooks collection ( MM versions ).part4.rar 100.14 MB
Computer ebooks collection ( MM versions ).part5.rar 47.93 MB
No password for Mediafire Links.
Links are not INTERCHANGEABLE.
Computer ebooks collection ( MM versions ).part1.rar  143.051 MB
Computer ebooks collection ( MM versions ).part2.rar  143.051 MB
Computer ebooks collection ( MM versions ).part3.rar 143.051 MB
Computer ebooks collection ( MM versions ).part4.rar 143.051 MB
Computer ebooks collection ( MM versions ).part5.rar 89.318 MB
Last edited by KznT; 08-09-2010 at 04:14 PM..
ကိုကိုသီဟ, ကိုပိုးဇာ, ကိုပျင်း, ကိုဦး, ချစ်သမီး, ချစ်သားငယ်လေး, ဂတုံးလေး, စစ်တွေသားချေ, ညီညီလင်း, နီထွန်းဦး, မင်းမင်း၀၅၂, မိုးလွင်, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဧရာဝတီ, ကောင်းကောင်း, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်စည်သူ, အောင်လွင်ဦး, ငြိမ်းချမ်း, မြင့်မိုရ်, ပြာဂလောင်, ဖြိုးယံလေး, နိုးတူး, 666, airnnebrown, amaung344, arbwar, aungzaw, aungzawlin, AZM, bodavid20, bonge, daya, hellboy, hightechkey, KingPaladin, ko myo, kyaukphyu, lazyguylay, Lwin Thu, maungzaw, Mg Lazy, minthumon, moe_poung, openeyes, pannuko, paradise(SMTU), phoelapyaee, phyomyintthein, tartarlay18, Thein Htun, thighwanna, thurein, tree lover, tu tu, Ye Aung, zinwinhtike01, zo
KznT......( MM versions ) Computer ebooks collection .... sharing တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကို part 1 ပဲ ဒေါင်းလို့၇တယ် ကျန်တာ ဒေါင်းရင် file expired ပဲ ပေါ်လာတယ်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကိုပိုးဇာ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကိုပိုးဇာ
မနက်ဖြန်လောက် ပြန်လာကြည့်လိုက်ပါ - ကျွန်တော် ပျက်နေတဲ့ Links အားလုံး ပြန်ပြင်ပြီး တင်ပေးထားပါ့မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
( Update !! ကျွန်တော် Ifile Links အားလုံး ပြန်ပြင်ပေးထားပြီးပါပြီ )
Last edited by KznT; 08-09-2010 at 04:15 PM..
ကိုပိုးဇာ, ချစ်သားငယ်လေး, စစ်တွေသားချေ, နီထွန်းဦး, သက်နိုင်, မောင်ပေါ်ဦး, AZM, bonge, kyaukphyu, Lwin Thu, thurein, zo
အကိုရေ စာအုပ်တွေ တအုပ်ချင်းဆီ ဒေါင်းလို့ ရမလားဗျာ... ဆိုဒ်တခုစီက ၁၀၀ မဂ်ဆိုတော့ ဒေါင်းရတာ အဆင်မပြေလို့ပါ..
Last edited by KznT; 23-09-2010 at 12:23 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ HtitChoneMoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကို HtitChoneMoe ဘယ်လောက်လောက် Size ဆို ဒေါင်းလုပ်ချရ အဆင်ပြေမလဲ ဆိုတာ တစ်ချက် ပြောကြည့်ပါ - တစ်အုပ်ချင်းစီကျတော့ စာအုပ်တွေက ပမာဏ များလို့ ကျွန်တော့်အတွက် တင်ပေးရတာ အဆင်မပြေလှပါဘူး - အဲ့ထက် စိုးတာက Uploading sites တွေက တင်ပြီးထားလို့ Download ချတဲ့ လူ မရှိရင် ခဏခဏ အဖျက်ခံရတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့တော့ ကျွန်တော့်မှာ တစ်အုပ်ချင်း တင်ပေးလိုက် နောက် ဖျက်ချခံရလိုက် - လိုချင်တဲ့သူက တောင်းလိုက် ပြန်ဖြည့်ပေးလိုက် ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတော့ ရေတိုမှာ အကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့် ရေရှည်မှာ စာအုပ်လိုချင်တဲ့ သူအတွက်ရော - စာအုပ်တင်ပေးရတဲ့ ကျွန်တော့် အတွက်ပါ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်လို့ပါ။ ကို HtitChoneMoe အနေနဲ့ ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ အဆင်ပြေနိုင်လောက်မယ့် ပမာဏကို တစ်ချက် ပြောပြကြည့်ပါ။ ဥပမာ မက် ၃၀ တစ်ပိုင်းချင်းစီဆို အဆင်ပြေမလား - ဒါမှမဟုတ် မက် ၅၀ တစ်ပိုင်းချင်းစီ ဆို အဆင်ပြေမလား - စသဖြင့် အများဆုံး တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ တတ်နိုင်မယ့် ပမာဏလေးကို ပြောကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်ကြိုးစားပေးပါ့မယ်။
Last edited by KznT; 14-09-2010 at 10:09 PM..
ချစ်သားငယ်လေး, နီထွန်းဦး, သန့်ဇင်ဌေး, bonge, hellboy, Lwin Thu, openeyes, thurein, zo
ကျွန်တော်ကြားထဲ ကပြောပေးပါမယ် အကို ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီစာအုပ်တွေလိုချင်ပါတယ် သို့သော် မက်များနေတာကြောင့် မယူဖြစ်တာပါ အပေၞ က အကို လဲ ရန်ကုန်ကထင်ပါတယ် ရန်ကုန်ကွန်နရှင်နဲ့ဆိုရင် တော့
mp3သီချင်း တစ်ခွေစာဖြစ်တဲ့ 30မက် နဲ့ 40 မက် အဆင်ပြေ ဆုံးပါ အကို အခုလို့ပြန်တင်ပေးမယ် ပြောလို့အရမ်းဝမ်းသာ မိပါတယ် အကိုကေဇက် ရေးတဲ့ စာတွေအားလုံးကိုကြိုက်ပါတဲ့ ဖိုရမ်မှာ ကျွန်တော်လေးစာရတဲ့ မျှဝေသူပါ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အကို
နီထွန်းဦး, KznT, Lwin Thu, openeyes, thurein, zo
ညီအကို မောင်နှမ တွေ အားလုံးကို လေးစားပါတယ် .......
ကို ကေဇက် တင်ပေးထားတဲ့ ဖိုင်ကို ..... ၃၀ မက် စီခွဲပြီး Ifile နဲ့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ....
HJSplit နဲ့ တော့ ပြန်ဆက်ပေးပါ ......
ကို ထစ်ချုန်းမိုး နဲ့ညီလေး မောင်ပေါ်ဦး တို့ အဆင်ပြေကြပါစေ ....
Computer ebooks collection ( MM versions )
Last edited by ချစ်သားငယ်လေး; 15-09-2010 at 04:55 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 18 ဦးတို့မှ ချစ်သားငယ်လေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ကိုပျင်း, နီထွန်းဦး, လင်းလက်တာရာ, မောင်ပေါ်ဦး, ငြိမ်းချမ်း, နိုးတူး, AZM, bonge, hellboy, KznT, Lwin Thu, mercury, openeyes, pannuko, thurein, tu tu, zo
ကိုချစ်သားငယ်လေးရေ - ကျေးဇူးပါဗျာ
ကိုချစ်သားငယ်လေး တင်ပေးနေပြီ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ပြန်မတင်ပေးလိုက်တော့ပါဘူး - လိုချင်ကြတဲ့ သူတွေလည်း သူတင်တာ ဆုံးတဲ့ထိ စောင့်ပြီးသာ ဒေါင်းပေးကြပါ - အပိုင်းတွေတော့ တော်တော်များမယ်ဗျ - တကယ်လို့ အားလုံးလိုချင်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ တစ်အုပ်စ နှစ်အုပ်စလောက် လိုချင်တာမျိုး ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ဆီ စာချွန်လွှာပို့ပြီး တောင်းနိုင်ပါတယ်။ သပ်သပ် Upload တင်ပြီး မေးလ်ကို Links ပို့ပေးပါမယ်။
Last edited by KznT; 15-09-2010 at 04:05 PM..
ကိုပျင်း, ချစ်သားငယ်လေး, နီထွန်းဦး, အိသက်နှင်း, မောင်ပေါ်ဦး, နိုးတူး, aung lwin, hellboy, openeyes, thurein, zo
ညီငယ်တွေအတွက် စေတနာထားပြီး လုပ်ပေးထားတဲ့အကိုတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့...
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ အောင်ကိုသန့် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သားငယ်လေး, မျိုးဟန်ထက်, thurein, zo
13-10-2010, 06:09 PM
ပို့စ်9ခုအတွက် 139 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အခုလို ဖြန့်ဝေပေးထားတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
networking (CISCO) အပိုင်းကို အခြေခံကနေစပြီး ရေးထားတဲ့ စာအုပ်များရှိလားမသိဘူးခင်ဗျ
အဲဒီ CISCO ဆိုတာကြီးကို လေ့လာကြည့်ချင်လို့ပါ ။ သူ့ရဲ့ သဘောတရားရယ် ။ အသုံးပြုတဲ့ ပစည်းတွေရယ် ။ ဘယ်လိုမျိုးဆိုတာပေါ့ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ gratecomputer အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, thurein, zo
Find More Posts by gratecomputer
CISCO နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်တွေ ကျွန်တော် အပါအဝင် မြန်မာ မိသားစုဝင်တွေ တင်ပေးထားတာ ဒီနေရာမှာ ရှိပါတယ်။ တစ်ချက်လေ့လာကြည့်ပါ - လိုအပ်တဲ့ စာအုပ်တွေ အဲ့မှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
ကိုပျင်း, ကိုဦး, နီထွန်းဦး, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်ပေါ်ဦး, thurein, zo
ကိုိ Kznt ခင်ဗျာ.. mediafire ကနေ ဒေါင်းတာ
! C:\_Users\_William\_Downloads\_Compressed\_Computer ebooks collection ( MM versions ).part1.rar: CRC failed in Computer ebooks collection ( MM versions )\_Linus_OS_Myanmar.pdf. The file is corrupt
! C:\_Users\_William\_Downloads\_Compressed\_Computer ebooks collection ( MM versions ).part4.rar: Packed data CRC failed in Computer ebooks collection ( MM versions )\_PCupgrade&repair_simplified.pdf. The volume is corrupt
! C:\_Users\_William\_Downloads\_Compressed\_Computer ebooks collection ( MM versions ).part5.rar: CRC failed in Computer ebooks collection ( MM versions )\_PCupgrade&repair_simplified.pdf. The file is corrupt
အဲ ဒီ error တက်နေလို့ ကူညီပေးပီး စစ်ပေးပါအုံးဗျာ
နီထွန်းဦး, Lwin Thu, zo
တည်နေရာ: ချစ်သူနဲ့ ဝေးသေ&
ပို့စ်6ခုအတွက် 17 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
လင့်လေးတွေ ပြန် Update လုပ်ပေးကြပါလားဗျာ...
ကျွန်တော် လဲ လိုချင်လို့ပါ။ အကုန် expire ဖြစ်ကုန်လို့ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ winaingso အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by winaingso
Originally Posted by winaingso
အကို ရေ ညီလေး စမ်းကြည့်တာတော့ အကုန်ရပါသေးတယ် အကို
သေချာလေး ပြန်စစ်ကြည်ပါဦး ကျတော်တော့ ရတယ် .တကယ်လို့ မရဘူး ဆိုရင်
ကိုဦး, KznT, zo
ကျွန်တော် Ifile ကနေပြန်တင်ပေးထားပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ကိုဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, သန့်ဇင်ဌေး, နိုးတူး, bonge, KznT, zo
အရင်တည်းက တစ်အုပ်ချင်းစီ ပြန်တင်ပေးချင်တာ ကျွန်တော်လည်း အချိန်မပေးနိုင်လို့ ချက်ချင်း မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူး - နောက်ပိုင်း လိုသူတွေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ စာအုပ်ကို တစ်အုပ်ချင်း ယူနိုင်အောင် အခု တစ်အုပ်ချင်းစီ ပထမဆုံး ပို့စ်မှာ အားလုံး ပြန်တင်ပေးထားပါတယ် - နောက်တိုး ကျွန်တော် စုဆောင်းထားတဲ့ ကွန်ပြူတာအကြောင်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး မြန်မာလို ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်တွေပါ ထပ်ဖြည့်ပေးထားပါတယ် - links ခဏခဏ ပျက်တိုင်း ထပ်ဖြည့်ပေးနိုင်ဖို့ မသေချာတဲ့ အတွက် တတ်နိုင်သမျှ အားစိုက်ပြီး ဒေါင်းထားစေချင်ပါတယ် - ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိနေတယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်ယောက် လိုချင်လို့ အခက်အခဲ ဖြစ်တဲ့ အခါ Upload တင်ပေးပြီး အချင်းချင်း ကူညီပေးလိုက်ကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံ ပါရစေ -
ကိုဦး, ချစ်သမီး, နီထွန်းဦး, မေဦးမွန်, နိုးတူး, bonge, hellboy, moe_poung, tu tu, zo
ကျေးဇူးပါပဲ .....ခုလို အပင်ပန်းခံပြီ မသိတဲ့ သူတွေ သိအောင်လုပ်ပေးကြတာ ကို ......
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ nyi phyo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
nyi phyo ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by nyi phyo
စာရေးသူ - ဆရာဦးဇော်လင်း (Youth Computer)
စာအုပ်အမည် - ကွန်ပျူတာအကြောင်း အသေးစိတ်သိစရာ (Computer in Details)
Learning Basic HTML (မြန်မာလို) (flash application) လေးပါ။
Size က 29.1 MB ပါ။ တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ်။
စာအုပ်အမည် - ကွန်ပျူတာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း
စာရေးသူ - မသိ (သိရင်ပြောပြပေးကြပါခင်ဗျာ)
စာအုပ်အမည် - ကွန်ပျူတာစတင်အသုံးပြုသူများအတွက် အခြေခံနှင့် Windows Complete Installation
စာရေးသူ - အစုံ
စာအုပ်အမည် - မြန်မာမိသားစုဂျာနယ် (အတွဲ (၁) အမှတ် (၁))
စာအုပ်အမည် - Internet နှင့် မိတ်ဆက်
စာအုပ်အမည် -အင်တာနက်သုံးစွဲသူများအတွက် အသိပေးချက် (၈) ချက်
Last edited by thureinsoe; 03-03-2011 at 05:01 PM..
နီထွန်းဦး, သန့်ဇင်ဌေး, ဧရာဝတီ, ကောင်းကောင်း, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, ငြိမ်းချမ်း, bagothar85, bonge, g00gle, KznT, moe_poung, runner.zaw, zo
ကိုမျိုးသူရရေး တဲ့ everyday_internet မြန်မာလိုစာဖြစ်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ thureinsoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, သန့်ဇင်ဌေး, မေဦးမွန်, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, bagothar85, g00gle, KznT, zo
ဒေါင်းသွားပြီ အကိုရေ ကျေးဇူးပါပဲ မီဒီယာဖိုင်ယားကပဲ ဒေါင်းသွားတယ် လင့်တွေ မသေဘူဗျ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ထွန်းတော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ထွန်းတော်
17-07-2011, 09:31 AM
ပြန်စာ - adobe premiere video editing စာအုပ်လေး
ိadobe premiere နဲ့ video editing လုပ်နည်းစာအုပ် လေး ဆရာဇော်လင်းရေးထားတာ အဲစာအုပ်လေးလိုချင်လို့ပါ ဘယ်မှာမှရှာလို့မရလို့
ဆရာဦးအောင်လင်းရေးတဲ့adobe premiere video တည်းဖြတ်ခြင်းစာအုပ် လေးကို
credt to http://www.nyinaymin.org/
ဆွမ်းပေါင်, နီထွန်းဦး, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, amaung344, aprilflame, bonge, g00gle, lazyguylay, runner.zaw, yawnathan, zo
အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကို KznT ၊ တကယ်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားထက်ပို ကျေးဇူးတင်နိုင်တဲ့စကားရှိရင် အဲဒီစကားကို ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော် part1, 2, 3, 4,5အကုန်ကုးသွားပါတယ် အကို့ကိုလည်းလေးစားပါတယ်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ whitetiger အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
လိုချင်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေ တော်တော်များများ ဒေါင်းလော့ လုပ်သွားပါပြီ ။ ဖတ်ဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ nainglynn အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by nainglynn
ebooks, myanmar ebooks
Photoshop CS & CS2 Ebooks Collection (48 Ebooks) ကိုပိုင် E-books များ929-06-2010 05:52 PM